Soomaali Dhimasho iyo Dhaawac loogu Geystay UK. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASoomaali Dhimasho iyo Dhaawac loogu Geystay UK.
Soomaali Dhimasho iyo Dhaawac loogu Geystay UK.
Wararka ka imaanaya Dalka ingiriiska ayaa sheegaya in labo wiil oo Soomaali ah la dilay, halka mid kalana la dhaawacay, kadib markii ay weerar kala kulmeen Kooxo Mindiyo ku hubeysnaa.
Dilka ayaa ka dhacay Xaafadda Borough of Camden ee Magaalada London, waxaana Soomaalida kunool Dalkaasi ay sheegeen in Kooxihii dilka u geystay ay wateen Gawaari, isla goobtana ay ka baxsadeen.
Ciidamada Booliiska oo tagay halka dilalka iyo dhaawaca uu ka dhacay ayaa bilaabatay baaritaano ay ku sameynayaan, waxayna Isbitaal u qaadeen Wiilka Dhaawaca ah oo la sheegay in uu dhiig baxayay.
Ehelka Dhalinyarada geeriyootay ayaa sheegay in Wiilashooda ay dhiig bax u geeiyoodeen, kadib markii Mindiya looga dhuftay Uur ku jirta, iyagoona dhiig baxay.
Dhalinyarada kunool wadanka Ingiriiska gaar ahaan Magaalada London ayaa la kulmo weeraro ay u geysanayaan Dhalinyaro kale, waxayna isku adeegsadaan Mindiyo.
Dilalka Loo geysanayo Soomaalida ayaa kusoo kordhaya Magaalada London ee Caasimadda Dalka Ingiriiska, waxaana falalkaasi mararka qaar lagu eedeeyaa in ay ku lug leeyihiin Soomaali kale oo isla London ku sugan.
Booliiska ayaa sheegay in ay gacan adag ku qaban doonaan, shaqsiyaadka dilalka Geysta, waxayna tibaaxeen in Cadaaladda ay marsiin doonaan kolka ay qabtaan dadkaasi.
Sh.Shaakir: “Waxaan noqoneynaa maamulka ugu horreeya ee ciribtira Al-shabab”
41,716 total views, 2,469 views today
41,716 total views, 2,469 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,788 total views, 2,468 views today
41,788 total views, 2,468 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,800 total views, 2,468 views today
41,800 total views, 2,468 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,824 total views, 2,468 views today
41,824 total views, 2,468 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,852 total views, 2,465 views today
41,852 total views, 2,465 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]